ရသစုံ – ပဒသော
“ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ”သီချင်း MVနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သူငယ်ချင်းကောင်းပီသစွာ ယုန်လေးအတွက် ဝိုင်းဝန်း ကူညီပေးခဲ့တဲ့ မြင့်မြတ် “ငါတို့အားလုံးရဲ့မြေ” ရိုက်ကူးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်း အရုံးမှာ ဒီကနေ့ သြဂုတ်လ ၆ရက်နေ့က ယုန်လေးနဲ့အတူတူ အကယ်ဒမီ သရုပ်ဆောင်မြင့်မြတ်ကလည်း သွားရောက်ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ်။ ယုန်လေးကို ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးကနေ ရာသက်ပန်ထုတ်ပယ်လိုက်ပြီဆိုတာဟာလည်း ကောလာဟလ သတင်းတွေပါလို့ ရုပ်ရှင်အစည်းရုံးဥက္ကဌ ဦးညီညီထွန်းလွင်က ပြောပါတယ်။ Lin Lin
‘၄” ရက်အတွင်းအဆီပိုများဝုန်းဝုန်းနဲ့ကျနည်း” 🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒🥒 လိုအပ်သောပစ္စည်းများ- ဂျင်း ပါးပါးခြစ်ထားပါ (လက်ဖတ်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း) သခွါးသီး အနေတော် ၁လုံး ပါးပါးလှီးပါ သံပရာသီး အနေတော် ၁လုံး ပါးပါးလှီးပါ ပူစီနာ အရွတ် (၁၂ ရွတ်) -အထက်ပါပစ္စည်းများအားလုံးကို အနည်းဆုံး တစ်လီတာဆန့်ဝင် အဝနည်းနည်းကျယ်သော ရေဘူးထဲသို့ ရောထည့်ပါ။ ပြီးလည် ရေအပြည့်ထည့်ပီး
ဒီလိုမောငျနှမဘဝလေးထဲမှာ အကွိုကျဆုံးအရာလတေဈခုတော့ ရှိကွတယျ အဲ့ဒါက?ရှမှငြေးပုသိမဟြာလဝါ သူဌေးမုန့နြှင့မြုန့မြွိုးစုံလုပငြနြး ဒီလိုမောင်နှမဘဝလေးထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးအရာလေတစ်ခုတော့ ရှိကြတယ် အဲ့ဒါက?ရွှေမြင်းပုသိမ်ဟာလဝါ သူဌေးမုန့်နှင့်မုန့်မျိုးစုံလုပ်ငန်း ဒီလိုမောင်နှမဘဝလေးထဲမှာ အကြိုက်ဆုံးအရာလေတစ်ခုတော့ ရှိကြတယ် အဲ့ဒါက?ရွှေမြင်းပုသိမ်ဟာလဝါ သူဌေးမုန့်နှင့်မုန့်မျိုးစုံလုပ်ငန်း #credit.Phyu Phyu Htwe Unicode ဒီလိုမောငနြှမဘဝလေးထဲမှာ အကှိုကဆြုံးအရာလတဈေခုတော့ ရှိကှတယြ အဲ့ဒါက?ရှမှငွေးပုသိမဟွာလဝါ သူဌေးမုန့နွှင့မွုန့မွှိုးစုံလုပငွနွး ဒီလိုမောငျနှမဘဝလေးထဲမှာ အကွိုကျဆုံးအရာလတေဈခုတော့ ရှိကွတယျ အဲ့ဒါက?ရှမွေငျးပုသိမျဟာလဝါ
မွေးကတည်းကစ ယနေ့မှ ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ဖူးတဲ့မြွေဖြူလေးပါ …..မွေးအနက်ကောင်နှင့် အတူရှိနေပါတယ်…။ဂန့်ဂေါမြို့နယ်မြောက်ပိုင်း ကန်တောရစာသင်တိုက်ကျောင်းတွင်ရှိနေပါတယ်….။ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ယောနယ်မြောက်ပိုင်း U Than Win Naingဘယ်လိုကံကောင်းမှာလဲ….?လူတိုင်းရဲ့ ဘဝမှာ အပြည့်ချင်ဆုံးဆုတစ်ဆုကဘာများဖြစ်မလဲ? ထီသာပေါက်ကြည့်လိုက် ဘာလုပ်မှာ၊ညာလုပ်မှာနဲ့စိတ်ကူးတွေယဉ်ထားကြတာပါ။ဒီတော့ ထီပေါက်ချင်တာဟာ ဘဝမှာအပြည့်ချင်ဆုံးဆုပါပဲ။ဒါပေမဲ့ ထီသာလတိုင်းထိုးတယ်။မပေါက်ဘူး။ကြာလာတော့ စိတ်ဓာတ်ကျလာတယ်။ စိတ်ဓာတ်မကျပါနဲ့၊အတိတ်နမိတ်တို့၊အိပ်မက်တို့ကိုသတိထားတတ်မယ်ဆိုရင် ထီပေါက်ဖို့အခွင့်အရေးပိုပြီးများလာနိုင်ပါတယ်။ဘယ်လိုအတိတ်နိမိတ်လဲ။အိပ်မက်လဲ? မြွေဖြူအိပ်မက်ပါ။အိပ်မက်ထဲမှာ မြွေဖြူတွေ့တယ်၊မြွေဖြူတွေအများကြီးအုပ်စုလိုက်တွေ့တယ်ဆိုတာသင့်ရဲ့ ကံကောင်းစေတဲ့နိမိတ်ပါပဲ။အဲ့အိပ်မက်သာမက်လို့ကတော့ ထီသာပြေးထိုးလိုက်ပါတော့။ထီမပေါက်ဘူးဆိုရင်တောင် တစ်ခြားကံကောင်းမှုတွေ ရလာတတ်ပါတယ်။အဖြူရောင်မြွေနဲ့ကံကောင်းတာကဘယ်လိုဆက်စပ်နေတာလဲဆိုရင်
ပခုက္ကူသီဟိုဋ်ရှင်ဘုရားကြီးမှာတွေ့ခဲ့တဲ့ လှိုဏ်ခေါင်းကြီးရဲ့ အဖြေကိုတွေ့ပြီ…
ပခုက္ကူ သီဟိုဋ်ရှင်ဘုရားကြီးအတွင်းရှိ မြေအောက်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အဖြေရှာတွေ့ပြီ ဩဂုတ် ၆ ပခုက္ကူသီဟိုဋ်ရှင်ဘုရားကြီးအတွင်းရှိ မြေအောက်လိုဏ်ခေါင်းကို ဂေါပကအဖွဲ့မှ ယနေ့တွင် စမ်းသပ်အဖြေရှာတွေ့ပြီလို့ သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ ပခုက္ကူမြို့ သီဟိုဋ်ရှင်ဘုရားကြီးအတွင်းရှိ မြေအောက်လိုဏ်ခေါင်း ကိုဂေါပ ကအဖွဲ့က စမ်းသပ်အဖြေရှာသည့်လုပ်ငန်းတစ်ခုအဖြစ် ဘုရားများရေသပ္ပာယ်ရာတွင်တစ်နေရာတည်း ရေများ စုစည်းစွန့်ပစ် ရေကျ ဆင်းသည့် လိုဏ်ခေါင်းဟုတ်မဟုတ် ယနေ့ သြဂုတ်လ ၆ရက်တွင် လက် တွေ့စမ်းသပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့
ယူနိုက်တက်အာရပ်စော်ဘွားများပြည်ထောင်စု(UAE)နိုင်ငံ၊ အာဂျမင် (Ajmen) မြို့လည်ရှိ သားငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်ရောင်းချသော ဈေးတစ်ခုတွင် (သြဂုတ်လ ၅ ရက်) ညနေပိုင်း ၆ နာရီ ၃၀ မိနစ်ခန့်က မီးအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းမှုဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။ အာဂျမင်မြို့မှာ ဒူဘိုင်းမြို့နှင့် ကီလိုမီတာ(၅၀)မျှသာဝေးကွာပြီး အခင်းဖြစ်ပွားချိန်တွင် မီးသတ်ကားများမီးလောင်ရာနေရာသို့တန်းစီထွက်ခွာခဲ့ကြသည်။ ယခုအချိန်တွင်မီးကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီး ထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကိုမသိရှိရသေးပါ။ ထိုအဖြစ်အပျက်မှာ လက်ဘနွန်နိုင်ငံ၊ ဘေရွတ်မြို့ဆိပ်ကမ်းပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီး နောက်ထပ်(၂၄)နာရီအတွင်းတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Photos
လားရှိုးထောင်အနီး နေအိမ်တချို့ကို အင်အားသုံးဖယ်ရှား Wednesday, August 5, 2020 ရှမ်းပြည်နယ်၊ လားရှိုးအကျဉ်းထောင်အနီး အိမ်သုံးလုံးဟာ ထောင်မြေ နယ်နိမိတ်ထဲ ပါနေတယ်ဆိုပြီး အ ကျဉ်းထောင်တာဝန်ရှိသူက ဒီကနေ့မနက်မှာ အင်အားသုံးဖယ်ရှားခဲ့ပါတယ်။ လားရှိုးမြို့ ရပ်ကွက် ၁၂ မဉ္ဇူလမ်းနဲ့ ခေးနင်းလမ်းကြားက အဲဒီအိမ်တွေကို အစိုးရအိမ်ဥပစာ ဥပဒေနဲ့ သတိပေးစာပေးပြီး ဖယ်ရှားခိုင်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
၁၀ တန်းအောင်စာရင်းမှာ ပါချင်သူတွေအတွက် မြင်မြင်ချင်းသာ ရှယ်လိုက်တော့ဗျာ…(ရှယ်ပြီးရင် တက်ချင်တဲ့ တက္ကသိုလ်သာရွေးထားလိုက်တော့..)
စာမေးပွဲအောင် ဂါထာတော် “ဒေဝါနံ နန္ဒနော ဒေဝေါ၊ ဒေဝ ဒေဝေန နန္ဒိနော။ ဝေဒ ဒိနေန ဝေဒေန၊ ဝေဒိ ဝေဒေန ဝေဒိနော ” “ဘုန်းတော်ဂုဏ်တော်ဖွင့် ဒဝနကာရ ဂါထာ” ဟူ၍လည်းခေါ်သည်။ ယင်းဂါထာကို ရတနာသုံးပါး မိဘ ဆရာသမားများကို အာရုံပြု၍ နေ့စဉ် (၇)ခေါက် – ရွတ်ပါ။